Tababarka sanadka 3e - GO! SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > koorsooyinka our > Sanadka 3e
Tabobarkan wuxuu kuu diyaarinayaa xirfado ku saabsan caruur, waayeel iyo daryeelka guriga.
Qalabka korontada & Farsamada rakibaadda korontada
FULL-TIME // TSO // CAMPUS RUGGEVELD
Waxaad baraneysaa korontada iyo aragtida rakibaadda, adigana aad isku diyaariso xirfadaha farsamada gacanta ee qaybta korontada.
Ciyaartoyda Spectrum waxay raacaan waxbarasho isboorti oo firfircoon isla markaana waxay baranayaan isboorti kala duwan (isboortiga, ciyaaraha kubada, jimicsiga, dabaasha ...). Sidoo kale qaylo-dhaan, tababarka xaaladaha, muujinta iyo is-difaaca ayaa laga wada hadlay. Miyaad sidoo kale noqon doontaa cayaaraha Spectrum?
Makiinadaha makaanikada aasaasiga ah
Waxaad baraneysaa mashiinka ama kombiyuutarada gacanta lagu xakameynayo si aad wax uga beddesho Waxaad bilaabi kartaa isku-rogidda, wax-qabashada iyo kala-jajabinta waxaadna baraneysaa inaad isku-dubbarido oo aad burburiso dhismayaasha farsamada. Waxaad sidoo kale baraneysaa sida loola shaqeeyo mashiinada CNC. Waxaad baraneysaa inaad si habboon u shaqeyn karto sawirrada shaqada, falanqaynta shaqada iyo hababka shaqada.
Ma jeceshahay inaad la shaqeyso gacmahaaga iyo walxaha dabiiciga ah? Koorsadan waxaad ku heleysaa aqoon iyo waayo-aragnimo wax ku ool ah oo ku saabsan berrinka gudaha iyo dibedda, qalabka guriga iyo qurxinta gudaha.
Waxaad ka heleysaa adduunka mashiinka iyo koronto-dhaliyaha, otomaatikada, kontoroolka PLC, ... Waxaad baraneysaa sida mashiinnada loo xakameeyo oo loogu qaabeeyo habka kombiyuutarka (CNC, CAD-CAM). Hordhac guud ee farsamada casriga ah.
Waxaad baraneysaa inaad ku rakibto qalab koronto oo cusub guryaha. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale dib u cusbooneysiin kartaa iyo dayactir kartaa qalabyada jira. Waxa kale oo aad baran doontaa in aad ka shaqeyso goobo fara badan oo degaan iyo / ama qalab koronto.